Halka laga helo Goobaha Left shandadaha In Germany? | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Halka laga helo Goobaha Left shandadaha In Germany?
Halka laga helo Goobaha Left shandadaha In Germany?
Socdaalku waa biimayntii ugu dambaysay laakiin waa inaad ku samaysaa shandado la'aan, gaar ahaan layovers ama haddii kaliya aad qabto maalin oo lacag la'aan ah in mid ka mid ah Germany magaalooyinka caanka ah. Waxaan leenahay dhammaan macluumaadka aad u baahan tahay meelaha boorsooyinka bidix ee Germany saddex ka mid ah magaalooyinka ugu muhiimsan ee ay, Berlin, Munich, iyo Hamburg.
Haddii aad ka qayb Oktoberfest Munich, taagan baqdin iridda Brandenburg ee Berlin, ama ku raaxeysashada jawiga xafladda ee Reeperbahn ee Hamburg, kuwanu waa siyaabaha ugu sahlan uguna habboon si loo hubiyo in aad boorsooyinka si fiican loo daryeelo inta aad sahamin qaaday.
Goobaha Left shandadaha In Germany: Berlin
at Tegel Airport, waxaad ka heli doontaa meesha boorsooyinka bidix ee Terminal A oo maalin kasta ka furan iyagu waa 5 ahay in 10:30 pm. Qiimaha waxaad bixinaysaa ka kala duwanaan doonaa € 7.20 in € 9,90 oo ku xiran size ee boorsada. Dhererka wakhtiga kaydinta waa aan xad lahayn.
at Schonefeld Airport, waxaad ka heli doontaa meesha uu ka tagay boorsooyinka ee Terminal D Arrival. saacadood ay yihiin Sunday ilaa Jimcaha, ka 7:30 ahay in 11:30 pm iyo Sabtida ka 8 ahay in 6 pm. Qiimaha dhaxayn 4 € inay € 6 waayo, boorsooyinka gacanta iyo € 7 ilaa € 10 boorsooyinka caadi hubiyaa.
Goobaha Left shandadaha At tareen Stations
sahlaansashada tareenada kuu waa in ay furan yihiin 24 saacadood maalintii, toddoba maalmood toddobaadkii. Tareen Station Dhexe (Hauptbahnhof) waa meesha aad ka heli doontaa lookarrada iyo waxa ay ku taalaa meesha baabuurta la dhigto meel ka baxsan dhismaha weyn ee deegaanka C.
Iyadoo ku xiran baaxadda labiska aad u baahan tahay, waxay ku kici u dhexeeya € 4 iyo € 6 maalin iyo muddada kaydinta ugu badnaan waa 72 saacadood. Haddii aad doorbidayso booqday xafiiska boorsooyinka bidix ah, waxaa jira hal maalin la furo ka 6 ahay in 10 galabtii waana qiyaastii € 5 halkii shay.
xarumaha kale ee la kaydiyo labiska waxaa ka mid ah Alexanderplatz, Ostbahnhof, Potsdamer Platz iyo Zoologischer Garten. Easy si aad u ogaato goobaha boorsooyinka bidix ee Germany!
Goobaha Left shandadaha In Germany: Munich
Munich Airport waa ikhtiyaarka ugu fiican marka aad booqanaya magaalada. Xarunta Adeega ee Terminal 1 furan yahay 24 saacadood oo halkaas waa meesha labaad ee Terminal 2 laakiin saacadaha ay furan yihiin ka 5 waxaan ahay ilaa saqda dhexe maalin kasta.
Waxaad ku bixin doonaa inta u dhaxaysa € 5 iyo € 10, taas oo ku xiran of boorsooyinkaaga iyo sidoo kale waxyaabaha ay. Hubi madaarada’ website ka hor inta aadan u safri wararka ugu danbeeyey iyo garoomada diyaaradaha kale ee goobaha boorsooyinka bidix ee Germany.
Left shandadaha Goobaha Ugu Munich tareen Stations
Boorsooyinka lagu keydiyo Xarunta Dhexe ee Munich waxay kuu noqon doontaa neecaw. Waxaa jira tiro badan oo lookarrada iyo waxaa jira calaamado in ay si fudud u helaan iyaga. labiska A caadiga ah ee aad ku kici doona oo ku saabsan € 4 maalin kasta iyo ka weyn a, suud-case labiska xajmi ku saabsan € 6 maalin kasta. si kastaba ha ahaatee waxaa jira xad xannibaad 72-saac ah.
xarumaha kale oo badan ayaa lagu rakibay goobaha la mid ah.
Goobaha Left shandadaha In Germany: Hamburg
Your doorasho kaliya waa garoonka Hamburg. Xafiiska Left shandadaha waa at Terminal 2, heerka 1 Bixitaanka iyo waxa ay furan yihiin Isniinta ilaa Sunday ka 4:30 ahay in 11 pm. Waxaad ku bixin doonaa inta u dhaxaysa € 5 iyo € 25, oo dhan ku xiran size. The aad boorsooyinka waaweyn, aad lacag sare, sidoo kale garoonka diyaaradaha ayaa laga qaadaa charge 3 oo ah hal-mar oo khidmadda wax-qabadka shey kasta laga qaado.
Boorsooyinkaaga waad ku keydin kartaa halkan wakhtiyo xadidan waxaana ugu fiican inaad horay u sii hubiso kahor imaatinkaaga. Urursada macluumaadka ugu badan ee aad ka hor inta u safrin karaa.
Sida badan ee tareenada ee Europe ee, aad ku sugan tahay nasiib leh lookarrada, kuwaas oo dhan si fudud loo heli karo oo u furan yihiin 24 saacadood maalintii. celceliska kharashka waa maalin 5 € mana jiraan xayiraad size.
Bremen in ay Tareenadu Hamburg
Hanover in Tareenadu Hamburg
Cologne si Tareenadu Hamburg
Adeegyada gaarka ah: The 'Airbnb' Waayo, shandadaha
Waxaa jira shirkado yar in shaqaaleeyaan nidaam aad u la mid ah in ee Airbnb, oo keliya boorsooyinka. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad raadiso meel, dhigi Boos oo markaas ka tago bacaha aad meel shahaado in uu yahay ugu haboon adiga. Waa sida ugu fiican ee loo helo goobaha boorsooyinka ka tagay Germany.
Caymiska waxaa lagu daraa qiimaha iyo waxay ku kala duwan yihiin shirkad shirkada. Waxaad sidoo kale yeelan doontaa nabadda ee maskaxda in bacaha waa in gacmaha ammaan.
Kani waa adeeg aad u sumcad kaydinta in si sahlan waa in la isticmaalo iyo waxa jaban ilaa xad macquul ah. Waxaad ku bixin doonaa heerka guri of € 5 bac ah maalin kasta. bacda Your waxaa sidoo kale caymis ka badan € 800. Waxaa oo dhan waxaa ka mid ahaa in qiimaha.
Waxaad si fudud u baadhaan website for meel kuu dhow. markaas waxaad awoodi doontaa inaad si aad u dooratid gaar ah 'StashPoint' iyo marka aad soo daadiyaa off bacaha aad, tusto ciidankii aad Boos iyo aad soocaa!
adeegyada la midka ah in ay waxa ka mid ah Nannybag iyo BagBnb. Adeegyadan waxaa dhab ahaan waa la heli karo Europe oo dhan iyo si fudud loo isticmaali karaa Germany.
Marka safar iyo kaydinta boorsooyinka loo baahan yahay, waxaa had iyo jeer ugu fiican in loo diyaar garoobo. Laba-hubi dhammaan faahfaahinta oo hel xal adiga kugu habboon iyo meesha aad u socoto. Haddii taasi madaarada, tareenada, ama ka hubinta adeegyada khaaska ah ee khaaska ah khadka tooska ah, waxaa oo dhan laga heli karaa click ee badhan. boorsooyinka Happy iyo qaar ka mid ah lacagta badbaadiyo on tigidhada tareenka iyo isticmaalka aad Save A tareenka!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “Halka laga helo Goobaha Left shandadaha In Germany?” gal your site? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fleft-luggage-locations-germany%2F%3Flang%3Dso የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
shandad bidix Munich trainjourney Tranride TrainStation tareen safarka travelberlin travelgermany safarhamburg
Waa Maxay Best Book Dukaamada The In Europe
Tareenka Safarka Belgium, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareen Safar Talyaani, Tareen Travel The Netherlands, safarka Europe
Tareen Travel kasoo horjeeddo Diyaarad Travel - taas oo Best?
Safarka tareenka, Tilmaamaha Tareenka Safarka